Olona hafa no hanao izany - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2016-01 mpandimby ny Magazine > Ny olon-kafa dia hanao izany
Ny finoana iraisana dia ny hoe tsy voatery hanao zavatra ianao satria olon-kafa no hanao. Misy olon-kafa hanadio ny latabatra ao amin'ny trano fisakafoanana haingana. Misy olon-kafa hanoratra ny taratasy ho an'ny tonian'ny gazety amin'ity lohahevitra ity. Misy olon-kafa hanadio ny fako eny amoron-dalana. Izany no antony ahazoako mahatsapa ho afaka ihany koa ary manipy ny mug kafe any am-baravarankely amin'ny maha mpamily ahy.
Mila mandray ny oroko eto aho, satria tsy meloka tanteraka aho raha io fihetsika io no resahina. Na dia tsy manipy ny fako eny am-baravarankely aza aho dia matetika no mahita fa "olon-kafa" io. Fony mbola zatovo ny zanako dia nanapa-kevitra ny tsy handeha aho fa hiaraka amin'izy ireo mandritra ny taona. Raha teo am-pizahana raharaham-barotra ny vadiko, dia vitako izao ny asa fanaony.
Matetika aho olon-kafa. Rehefa niseho ny fotoana hiasana amin'ny minisiteran'ny vehivavy na hanao lahateny dia nitodika tany an-tsoroko aho hijery hoe iza no mbola afaka ankoatrako ary tsapako fa izaho irery no mitsangana. Tsy tiako foana izany, fa matetika aho no nitsambikina ary indraindray tsy azoko antoka hoe inona no nolazaiko hoe "eny".
Betsaka ny olona ao amin'ny Baiboly no nanandrana nanolotra ny lazany sy ny andraikitra nifandraisany tamin'olon-kafa, saingy tsy mandeha izany. Niala tsiny tamin'ny fomba tsara i Mosesy mba tsy hiverenany any Egypta. Nanontany tena i Gideona raha tena niresaka taminy Andriamanitra. Mpiady mahery? Tsy izaho izany! Nanandrana nitsoaka i Jona, saingy haingana kokoa noho izy ny trondro. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia tonga araka ny nantenainy fa hanao ilay asa. Rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy tamin'ny naha-zazakely dia tsy olon-drehetra izy fa izy irery no afaka nanao izay tokony hatao. Ity tontolo lavo ity dia mila "Andriamanitra miaraka amintsika". Tsy nisy olon-kafa afaka nanasitrana ny marary sy nampitony ny rivotra. Tsy misy olon-kafa afaka mampihetsika ny vahoaka amin'ny teniny toa azy afaka mamoky trondro trondro. Tsy misy olon-kafa afaka mahatanteraka ny faminaniana rehetra ao amin'ny Testamenta Taloha toa azy.
Fantatr'i Jesosy ny antony nahatongavany teto an-tany ary mbola nivavaka tao amin'ny saha izy mba handefasan'ny chalice an'ny Ray. Na izany aza dia nampiany ny fangatahana hoe "raha maniry izany ianao" ary nivavaka fa tsy ny sitrapony io fa ny sitrapon'ny rainy. Fantatr'i Jesosy fa tsy hisy haka ny toerany eo amin'ny hazo fijaliana satria tsy misy olona afaka manafaka ny olombelona amin'ny fahotany.
Ny hoe Kristiana dia matetika koa dia midika hoe tompon'andraikitra ary miteny hoe "Hataoko izany!" Miantso antsika Jesosy mba ho tonga olona mamaly ny antsony hanatanteraka ny didin'ny mpanjaka ho tia ny mpiray tampo amintsika.
Koa aoka isika tsy hijery an-kavia sy havanana amin’olon-kafa, fa izay tokony hatao. Enga anie isika rehetra mba hanahaka an’i Isaia, izay namaly an’Andriamanitra hoe: “Inty aho, iraho aho!” (Isaia 6,5).